Ungayikhetha njani eyona GPS yokuLanda umkhondo kwimfuno zakho ezizodwa zomntwana? | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Tags: autism I-Autism Kid GPS Tracker I-Global Positioning System Bantwana beTracker Bukela
Umhlaba uyakhula imihla ngemihla. Sinokubona izinto ezininzi ezintsha eziqala ukwenziwa imihla ngemihla. Ngokweli nqanaba, umntu uya kungena kwixesha elitsha lonke eligcwele igajethi ezimangalisayo kunye nezixhobo. Kolu lwandle lolwakhiwo lwanamhlanje noluncinci, kukho into yokuqala yesayensi ebizwa ngokuba yi-GPS. Ke, iyintoni iGPS? Makhe sijongise ngokukhawuleza kuyo, emva koko siya kuxoxa ngakumbi ngayo.
Yintoni inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS?
IGPS imele “Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi kuye”. Inkqubo yokulandela umkhondo we-GPS inezixhobo eziphathwayo ezivumela abantu ukuba babeke iliso kunye nokulandelela iindawo zabo ngephanyazo. Into ephambili emva kwayo ziisatellite kwisithuba ezisetyenziswa ikakhulu ukukhomba isikhundla somntu. Nokuba yeyakuphi indawo, iGPS iya kukuxelela ngokufanelekileyo indawo yakho. Ubukhulu becala, Inkqubo yokuLandelela iGPS isetyenziselwa ukufumana iindawo. Ulahlekile kwindlela? Uhakuna Matata! IGPS iya kunika eyona ndawo ichanekileyo okwangoku kwaye iya kukukhokela kwindawo oya kuyo. Ngoku masibe nombono wokuba leNkqubo yokuKhangela ye-GPS isebenza njani.
Ungayikhetha njani inkqubo ye-GPS yokuLanda umkhondo womntwana wakho okhethekileyo:
I-Autism iye yaxhaphaka ebantwaneni kwiminyaka embalwa. Abantwana abane-autism baziva ubunzima obukhulu kunxibelelwano. Babonisa isimilo esingaqhelekanga ngokuhamba kwexesha. Asinakuyichaza kwangaphambili indlela abaziphethe ngayo. Kubantwana abaphethwe yi-Autism, ukusebenzisa umkhondo we-GPS yinto eyimfuneko, hayi eyokunethezeka. Njengoko sibona, abantwana abane-Autism bahlala betshintsha kwindlela abaziphatha ngayo kwaye bazulazula ngaphandle kwendlu. Kubantwana abanje, iGPS yeyona nto ilungileyo. Nokuba bangaphi na aba bantwana, abazali babo baya kuba nendawo yabo ngalo lonke ixesha. Ngokwendlela ye-GPS yokulandelela eyona ndlela ichaphazelekayo, kufuneka ibe neempawu ezininzi kwaye kufuneka ibe yeyokujikeleza.
Ngaba ngenene sifuna umkhondo okhethekileyo wabantwana abane-Autism?
I-Autism inefuthe elihle kubantwana. Ingayitshintsha ngokupheleleyo indlela abaziphatha ngayo. Abantwana abanjalo banolwazelelo lokuphatha. Ngokuqinisekileyo akukho tracker ekhethekileyo esetyenziselwa abantwana abane-autism. Banokulandela umkhondo kunye nee-trackers ezilula ze-GPS. Ngapha koko, inenzuzo enkulu kubo. Ingxaki apha kukuba i-tracker mayingaziwa emntwaneni. Ukuze angoyiki.
Izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuba uthenge i-GPS Tracker:
Ngoku makhe sijonge ngokuthe gca kwizinto esimele siziqwalasele ngaphambi kokuthenga inkqubo elungileyo yokulandela umkhondo we-GPS:
Umntu ufuna ukulandela ntoni?
Umntu kufuneka aqale azi injongo yokufaka iGPS. Njengomntu kufuneka azi ukuba yeyiphi into ayilandelayo. Emva koko sinakohlulahlula uhlobo lwesixhobo sakhe.
Ukuba ufuna ukulandelela imoto yakhe. Ke isixhobo eso kufuneka somelele ngokomzimba kwaye sibukhali. Ayizukuba nengxaki yebhetri njengoko iya kuqhagamshelwa ngqo kwibhetri yemoto. Kufuneka kwakhona ibe nenkxaso eyomeleleyo yemagnethi ukuze idityaniswe nomzimba wesithuthi. Kufuneka iphinde ilungiselelwe ukuze ingasebenzi kakuhle kwisithuba esisekude. Kufuneka iphinde ingabinokuqhekezwa.
Kodwa eyona nto siyixhalabeleyo apha ngabantwana abane-autism. Umlandeli kufuneka axhotyiswe kakuhle ngezinto ezinokubonelela ngononophelo emntwaneni. Kwaye kuya kuphelisa ukuxinana kwabazali.
Ukuba umntu ufuna ukulandelela umntwana wakhe, ke umkhweli kufuneka abe mncinci. Ke, umntu unokuyinxiba ngokulula. Kufuneka kwakhona icwangciswe ukunika ingxelo rhoqo. Izixhobo ezincinci zihlala zinebhetri ebuthathaka kunye nexesha elincinci lebhetri. Ixesha leebhetri kufuneka lilungile. Kuya kubakho kwakhona iqhosha le-SOS elithumela umyalezo kaxakeka kwiifowuni zabazali. Ingasetyenziswa kwimeko yezilwanyana ezihamba kunye nokongezwa komzimba ongenamanzi kunye nokususwa kweqhosha le-SOS.
Kufuneka yenziwe ngokukodwa ngokuhambelana nokuthandwa kwabantwana ukuze umntwana aqalise ukuthanda loo nto. Kwaye uyakuhlala eyigcina kuye. Oku kuya kulunga kubo bobabini abazali kunye nomntwana. Kwangelo xesha, iya kuba kuhle kakhulu kwinkampani.
Ixabiso lesixhobo seGPS:
Into ephambili ephambili ekufuneka igcinwe engqondweni lixabiso lesixhobo seGPS. Kufanelekile ukuba ihlawulwe kwaye kwangaxeshanye, kufuneka ibonelele ngokusebenza okuhle kakhulu. Inkampani ibaluleke kakhulu. Kufuneka ixhase abathengi bayo kwaye ibanike ulwaneliseko olufanelekileyo. Ngokwesiqhelo, umntu kufuneka ahlawule i- $ 50- $ 100 yesixhobo seGPS kunye ne- $ 20- $ 40 kubhaliso. Inkampani ayifanele ibophe umthengi kwisivumelwano. Umsebenzisi ufanele aphelise ngokulula ubhaliso ngokuthanda kwakhe.
Ixesha leBhetri yesiXhobo:
Ukufika kwexesha kwebhetri kubonakala ngathi yeyona nto ibalulekileyo ekuthengeni esona sixhobo se-GPS. Kodwa ukuba sibona ngokucacileyo, siyakwazi ukukuqonda ukubaluleka kwale nto. Masithi umntwana uyabhadula ngaphandle kwekhaya lakhe. Abazali bakhe banokumfumana ngeGPS. Kodwa inkqubo iyavala njengoko ibhetri yomnaki-ndlela isezantsi zonke ngequbuliso Ke, kuyakuba yintoni ukusetyenziswa kwesixhobo esinjalo. Ke, umntu kufuneka aqwalasele le nto kwaye kuya kufuneka acele isixhobo esinegama elifanelekileyo leibhetri. Ukuba nebhetri enkulu ebukhulu akufuneki kube yingxaki kumsebenzisi kodwa kuya kufuneka akhumbule ukuba ibhetri kufuneka ihlale ixesha elide kwaye iguquke ngokulula.
Umkhondo wobunzima bomzimba:
I-Tracker kufuneka ibe nobunzima bokukhanya. Oku kungenxa yesizathu sabantwana. Ukuba umkhondo we-tracker unzima ke kuya kuba yingxaki kumntwana ukuba ayithwale. Oku kunokwenza umntwana aphulukane ne-tracker. Le yingxaki enkulu nakubazali. Abakwazi ukulandelela abantwana babo ngale ndlela. Ke ngoko, i-tracker mayibe lula ukuze ikwazi ukudityaniswa engalweni okanye emlenzeni womntwana.
Izixhobo zokuQhawula ubungqina:
Njengengxaki yebhetri, le ngxaki ikwangathi ayisiyonto inzulu. Kodwa inokunika ingxaki enkulu kumsebenzisi. Isixhobo kufuneka sibubungqina be-ha-ha. Masithi kukho isixhobo esikwi-GPS esiqhotyoshelwe emotweni kwaye sigqongiwe. Ke ayizukukhuseleka ukupaka isithuthi naphina njengoko iGPS Tracker iya kutyhila indawo yayo kubaduni. Le nto inyusa isoyikiso sobusela ngesixa esikhulu. Olona nyango lupheleleyo lomsebenzisi kukukhubaza i-GPS Tracker okwethutyana engazukungasebenzi. Ke ngoko, umsebenzisi kufuneka aqinisekise ukuba umkhombandlela we-GPS yinto-ubungqina.
5450 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje